Abasebenzisi abangafunekiyo! Iingcebiso ezivela kwi-Semalt Expert On What Can Can Do Against Them
Umntu oqhelekileyo ufumana phantse ii-imeyile ezili-100 ngosuku; Ezinye zazo zivela kwi-webmasters ngelixa ezinye zivela kwiinkampani okanye kumajelo eendaba ezithuthukisa iimveliso kunye neenkonzo. Ngokufanayo, iwebhusayithi yakho inokufumana iindwendwe ezininzi ngosuku, ezininzi zazo ezingabandakanyekanga okanye inzala kumaphepha akho ewebhu. Xa behamba ngewebhusayithi yakho, bahamba ngokukhawuleza bangabonisi umdla kumanqaku akho. Ngaloo ndlela, izinga lokuhlawula liye landa ukuya kuma-100% - wohnungsreinigung zã¼rich preise. U-Lisa Mitchell, u-10 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi kubalulekile ukuvimba bonke abasebenzisi abangafunekiyo ukuze uqinisekise ukhuseleko lwakho kunye nekhuseleko lakho lewebhu.
1. Vimba abasebenzisi ngabanye:
Kulula ukuvimbela amalungu ngamnye kwaye ubathintele ukuba bangaqhagamshelana nawe kwikamva. Unokwenza njalo ngokusebenzisa iiprofayile zazo. Ngokomzekelo, ukuba umntu uyakucasula kwi-Facebook okanye kwenye indawo yokunxibelelana kwezentlalo, unokumvimba ngokulula ngokuchofoza ukhetho lweBlock kwi-ID ye-Facebook. Ngokufanayo, unokubamba abasebenzisi abangafuneki kwiimeyile kwaye babike ii-ID zabo njengogaxekile. Ukuba uvimbe umsebenzisi, akayi kukwazi ukuthumela imiyalezo, njengezithuba zakho, tyelela iprofayili yakho ngaphakathi okanye ukhangele iindwendwe zakho zeendaba. Nangona kunjalo, uya kukwazi ukubona umfanekiso wakho wesiprofayili kwaye unokuqhagamshelana naye emva kwesinye i-ID.
2. Ungabandakanyi amaqela athile abantu:
Ukuba ukhathele iqela labantu, kufuneka uhlolisise izicwangciso> Ukhetho olutsha lwabafowunelwa kwicandelo lakho lobumfihlo kwaye ubayeke ukuba bangaqhagamshelana nawe kwikamva. Yilapho ungongeza khona oonxibelelwano, njengama-ID eendaba yoluntu okanye ii-ID ze-imeyile, ukuze zivale ngokukhawuleza. Ukuxhamla, ukuba abanye abantu abahambelani neprofayili yakho kwaye baqhagamshelane nawe ngokungaqhelekanga, unokudala izihlungi kwi-akhawunti yakho ye-Gmail kwaye ungeze ii-ID zabo ze-imeyile kwizo zihlunu.
3. Yakha i-ID ye-imeyile yesikhashana:
Enye yezinto ezilula kunye nezona zinto ezintle ongayenza ukuyeka abantu ukuba bangaqhagamshelani nawe kukudala ii-ID ze-imeyili zesikhashana. Oku kuya kuthintela abasebenzisi abangafuneki ukuba bathumele imiyalezo ekhutshweyo, inkohliso kunye neminye. Kuqhelekileyo ukuba abantu abangama-90% abhalisele i-akhawunti ye-intanethi ngamagama okuqala kunye nee-ID eziphambili ze-imeyile. Ngenxa yoko, baqala ukufumana imilayezo evela kubantu abangaziwa nabasolisayo. Uninzi lwee-imeyile lithunyelwa kwifolda yakho ye-junk okanye ugaxekile ngokuzenzakalelayo, kodwa ezininzi zazo zijoliswe kwibhokisi lakho lebhokisi.
4. Ungabhalisi kwii-newsletters ezingaziwa:
Ukuba ubhalisele kwinani elikhulu leencwadana okanye iinkonzo zokuphromotha, amathuba kukuba uya kufumana ezininzi ze-imeyile nganye imihla. Indlela efanelekileyo yokukrazula abasebenzisi abangafuneki kwi-intanethi kukuba ungabhalisi iinkonzo ongazithandayo. Ngamanye amagama, kufuneka uzibhalise kwiifolda okanye i-imeyile ye-promotion eyanicasulayo phantse nsuku zonke. Ngaloo, nqakraza kwiKhenketho yokungabhalisi kwaye ukhusele ukuba ubukhulu bewebhusayithi bukuthumele imiyalezo ecasulayo. Ukungabhalisi enye yeendlela ezilungileyo zokunciphisa inani logaxekile ukungena kwibhokisi engenayo.